Google Docs-ka ayaa ah kaabista xafiiska otomaatiga ee Linux? | Laga soo bilaabo Linux
nano | | Aplicaciones, GNU / Linux
Inbadan oo naga mid ah waxay dhibaato weyn ku hayaan dhamaan xafiisyadan xafiisyada, waa inaan aqbalnaa laakiin GNU / Linux midkoodna qolalkani awood uma laha inay la xiriiraan dukumiintiyada lagu sameeyay qaabab lahaansho sida .doc, ama .docx, waa inaan si aad ah ugu cad nahay. in ugu yaraan 80% kuwa aan garaneyno (hadaaney aheyn 99%) kuwa aan waxbarano oo aan lashaqeyno ay adeegsadaan MS Office sidaa darteedna waxaan inbadan kaxidhnay markay tahay la wadaagida feylasha iyaga ama qofkasta oo aan isticmaalin qaabab bilaash ah. waddankii hooyo.
Dabcan, waa inaan sidoo kale miiska saarnaa in kasta oo aynaan si fiican ula macaamilin qaababka lahaanshaha, waxay u maareeyaan qaabab bilaash ah sida xun, haddaba, horeyba waa khaladka labada dhinac oo aan lahayn qaab caalami ah oo amar ku bixinaya halka ay sida ugu fiican ugu habboon tahay dhibaatooyinka ka dhashay kala-jabka xaaladdan oo kale ah, halkaas oo aan si xoog leh u taageersanahay inaan dejiyo qaab bilaash ah oo ah heer adag oo adeegsi ah 100% la jaanqaadi kara codsi kasta, iyo in fulintiisa buuxda la dhaqan-geliyo. In kasta oo ay iyaduna innaga khalad tahay innagoo haysanna dariiqa xun ee aannaan u adeegsan qaabab bilaash ah, kuwaas oo heer ahaan ah
Sikastaba, tani waa caqabad weyn waxayna jabisaa kubadaha xaalado badan, maxaa yeelay, kiisaskeyga shaqsiyadeed "Oh, shaqadu waxay ku timid fool xumo, adigu si qaldan ayaad u maareysaa erayga" o "Laba jeer baan gujiyaa mana furi doono faylka" (¬¬) wax aan ku eedeeyo Microsoft inay si fog u soo qaadatay markii aan furayay qaababka .odf, ma ogi inay ogaadeen inay furayaan .odf erayga MS tilaabooyin taxane ah ayaa loo baahan yahay marka loo eego isticmaalaha caadiga ah. Ma garanayo sida loo maareeyo, maxaa yeelay wax fikrad ah kama heyso waxa heck uu yahay feyl Dukumiinti Furan, in ka badan ama ka yar waa kuwa soo socda:
<° Furan dukumiinti furan.
<° Xulo dukumintiga galka uu ku yaal.
<° Fur oo garo in wax qaldan yihiin.
Tallaabooyinkan ma yaqaan qof kasta oo maqaar bisad ah, taas waa in lagu gaaraa qalad farta ama cilmi-baaris hore, runti, waa inaan raadsadaa si aan ugu sharraxo saaxiibtey sida loo furo feylkaas maxaa yeelay waligood kama helaan dugsiga Waxay barteen sida loo sameeyo wax ka baxsan Windows iyo Office.
Sikastaba, waxaa jira xal tan, waxaana looyaqaanaa Google Docs. Ha rabin inaad i disho, ma dooneysid inaad qoryo la igu gubo oo dabcan, faallooyinka kama maqna ... Geesi, ha bilaabin xD.
Ka tagida qaybta xorriyadda oo aan noqon munaafaqnimo (maxaa yeelay wax walba waa in loo sheegaa sida ay yihiin) Google Docs waxay bixisaa xalka dhibaatadan ina haysata inbadan oo inaga mid ah. Gaar ahaan aniga ahaan waxaan u baahanahay inaan la wadaago faylal kala duwan qaabab kala duwan dad badan waana wax aan macquul aheyn in laga tago Windows ilaa Linux taas kaliya. Sidoo kale waa wax aan raaxo lahayn in la rakibo MS Office by Wine, waana wax aan waxtar lahayn in la badbaadiyo .docx LibreOffice si fudud maxaa yeelay si fiican uma maamusho qaababkan.
Docs-gu wuxuu ka faa'iideystaa kuwa kale, taasina waa in wax kasta oo aad ku dhex sameyso laga soo dejisan karo qaababka ugu isticmaalka badan iyo awood badan oo lagu wadaago.
Qoddob kale oo la door bidaa waa dhaqdhaqaaqa Dokumentiyadu ii oggol yihiin. dhammee shaqada, fikradaha qabyada ah, dib u eeg faylasha ila wadaagay, iwm ... waxan oo dhan waxaan ka sameeyaa tan Android (Wuu yeelay, waan dilay isaga oo wax uun ku sameynaya).
Qodob kale oo ku saabsan raali ahaanta aan horay u soo sheegay, waa awooda si fudud aan ula wadaagi karo wax kasta oo aan sameeyo, feylashadayda oo dhan si fudud ayaa loo diraa, waxaa lagu soo dejisan karaa qaabka ugu haboon, waxaa laga arki karaa nidaam kasta oo qalliin, waxaad u baahan tahay oo keliya biraawsar dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo taageera aasaasiga tikniyoolajiyada cusub waana taas, taas oo waliba ii oggolaaneysa inaan ka shaqeeyo dukumiintigeyga oo aan ka aheyn oo keliya kumbuyuutarkeyga moobiilka laakiin kombuyuutar kasta, kaliya koontada Google.
Sida iska cad wax walba malab malab ah. Runta ayaa loo sheegayaa, tani waxay gelineysaa wax kasta oo tilmaamaya qarsoodigeyga qatar ku soo food leh, arin aad u jilicsan oo aan marwalba hubiyo inaan u qaado qaabka ugu faahfaahsan ee suurtogalka ah, taas oo ah sababta aanan waligey u qorin waxyaabo miisaan culus leh marka loo eego xogta shaqsiyeed ama waxyaabo aanan rabin in la ogaado, ma dhigo macluumaad ku saabsan macaamiishayda ama eheladayda, waxaan si fudud u qoraa maqaallo, waxaan la wadaagayaa midda PDF, mararka qaarkood waxaan abuuraa isbarbardhigyo iwm. Laakiin halista u gaarka ah ee noocan ah adeeggu ma badna, laakiin waa dhow, taas oo aan kugula talinayo haddii aad u adeegsanayso Dukumiinti ahaan xafiiska ugu weyn ee aniga oo kale ah, ku samee taxaddar aad u sarreeya iyo waxyaabo shakhsiyeed oo dheeraad ah, ku isticmaal halkaas. kuwa kale sida LibreOffice.
Qodob kale oo aan fiicnayn oo dhan ayaa ah in internetka la'aan, si fiican, aad u shiilan tahay. Way fududahay, qolkaani waa qashin haddii aadan haysan internet, taas oo galinaysa xaalad aad u xun oo ku xigta xalalka desktop-ka. Sikastaba, waxaan u istcimaalaa qeyb ahaan, maadaama isticmaalka dhabta ah ee aan siiyo ay kujirto taleefoonka (tafatirka waxa aan ka soo raro PC-ga) iyo wadaagida (koobiyeynta iyo ka tagida qof walba si uu ugu soo dejisto qaabka uu rabo).
By the way, waa in la ogaadaa in LibreOffice ay ku shaqeyso qaabkeeda mobilada iyo nooc kale oo HTML5 ah, oo, ay weheliyaan adeegyo sida sparkleshare wax kasta oo loo soo raray martigelinteena (ama shirkad aan adeegga ka iibsanno) waxay ku dambayn doontaa inay noqoto 100% beddel bilaash ah dhammaan dhibaatooyinkaas. Dabcan, noocyadan 'LibreOffice' waqti goyn wanaagsan ayaa la waayey taasna waxay xallin doontaa oo keliya dhibaatada dhaqdhaqaaqa, laakiin ma aha dhibaatada is-waafajinta, ma ogi, waxaan uun fikradaha hawada geliyaa.
Marka, waad ogtahay, adeegsiga Dukumiintiyada oo ah qaybta ugu weyn waa wax dhab ah oo la heli karo, waa mid wax soo saar leh, waa mid wax ku ool ah oo wax ku ool ah laakiin waxay leedahay khataro gaar ah waxayna leedahay wax ka badan xiriiriyeyaal daciif ah oo ku saabsan silsiladda shaqeynta, qof walba ayay ku xiran tahay inuu sameeyo waxa Cidkasta oo uu rabo adeegyada ay Google na siiso iyo waliba su'aal ah in aad looga taxadaro G weyn, maxaa yeelay taasi "Shar ha noqon" waxay umuuqataa suuq geyn ka badan sida aniga runta ah, ee ka taxaddar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Google Docs-ka ayaa ah kaabista xafiiska otomaatiga ee Linux?
Waad ku saxan tahay inaad adeegsato Google Docs, laakiin kuma raacsani in rakibida xafiiska MS ay dhib ku tahay Khamriga, hadii laga sameeyo Playonlinux waa wax aad u fudud wax qabadkiisana lama dhaafi karo, sidoo kale waxaan isticmaalaa Live's Skydrive, waxay ii ogolaaneysaa inaan wax ka bedelo feylasha internetka. .docx pptx waxyaalo la mid ah oo lagu abuuray Office 2010-07 oo aanan ku furi karin LibreOffice.
Laakiin Playonlinux ma shaqeeyo bilaa khamri, runtiina waa nooc ka mid ah qoraallo la hagaajiyay oo hagaajinaya oo otomaatig ka dhigaya. Waa isku mid, marka laga reebo in POL uu kuu fududeynayo qaar ka mid ah tallaabooyinka qaabeynta adiga.
Si loo waafajiyo google drive waxaan u isticmaalaa sidan:
Ku jawaab si lalalo
Hadda oo Google ay badaleyso siyaasadaha asturnaanta iyo in badan oo adeegyo la isku daro, waxaa lagama maarmaan ah in la arko haddii aysan ku sameyn Google Docs iyo adeegyada kale wixii ay ku sameeyeen code.google.com, oo aan marin u aheyn wadamada sida Cuba oo kale.
Waqtiga ayaa sheegi doona. Nasiib wanaagse, waxba igama yaabin haddii Google uu bilaabo inuu xaddido marin u helidda adeegyadiisa, marka laga reebo mashiinka raadinta laftiisa, taas oo haddii uu tabi lahaa ay u seegi lahayd maxaa yeelay runtii waa waxtar, laakiin maadaama tani ay tahay isha ugu weyn ee dakhliga, waxaan ka shakisanahay inay mamnuuci doonaan helitaanka isagu.
Waxay ahayd inaan raadsado si aan ugu sharaxo saaxiibaday sida loo furo feylkaas maxaa yeelay waligood laguma barin iskuulka inay wax ka qabtaan wixii ka baxsan Windows iyo Office.
Xalka: Lahaanshaha gabar saaxiib ah oo sidaas darteed keydinta sharraxaadda sababtoo ah Hasecorp hahahaha.
Geesinimo, ha bilaabin xD
Haha heerkan waan aarsan doonaa
Runtu waxay tahay in Dukumiintiyadan Google aanan u isticmaalin wax ka badan inaan wax uun ka furo bogga machadka haddii aan si sax ah u xasuusto maxaa yeelay LibreOffice weli igama aysan arkin wax aan faa'iido u lahayn inaan shaqo qabto ama wax la mid ah, way i caawisay si fiican
Runtu waxay tahay in Dukumiintiyadan Google aanan u isticmaalin wax ka badan inaan wax uun ka furo bogga machadka haddii aan si sax ah u xasuusto maxaa yeelay LibreOffice wali may iila dhaqmin wax aan faa'iido u lahayn inaan shaqo qabto ama wax la mid ah
ALLAAH !!! … Ku dhiirrigeliso koomayaasha (,) waxay u jiraan inay isticmaalaan kid 🙂
Waan ku faraxsanahay, waxaan isticmaali doonaa koomaha markaan ka soo baxo halkaas.
Halkaas looma baahna, ugu yaraan dhulkayga, taada ama fikirkaaga.
Haa waa lagama maarmaan. Waxaa dhacda haddii aadan dhigin kooma, akhristaha inuu akhriyo illaa ay ka helaan mid, iyo maadaama aadan dhigin, waa inay akhriyaan looooong isku xigta ... taasi waa, in koomayaashu ay u sheegaan akhristaha halka lagu hakado, lagu neefsado oo lagu sii wado akhriska. Ha ila doodin qorista in aan inbadan ogahay adiga LOL !!
Weli waan kaa yaraa oo indho fiican. Tag taabasho sanka tifaftiraha aad jeceshahay kaamarada.
Neef qaado ... Taasi waa marka aad kor u aqrinayso oo xitaa markaa wixii aan dhigay si fiican kor loogu akhriyo, illaa aad tahay dhagax-tuur oo ay lumisay awoodda sanbabada (oo ha ila doodin inaan la socdo mawduucyada LOL)
Adiga oo leh dood ujeedo ah waa wax aan macquul aheyn hahahaha. 😀
Nacalad waa run, ugu yaraan waan aqrin karaa.
Haddii aad sigaar cabeysid laabatooyinka maalintii oo dhan si fiican maxaan sameyneynaa
Waxa sida aadka ah ii dhibaya waa marka, tusaale ahaan, macallimiintu u adeegsadaan doc lahaansho, qaabab docx ah oo loogu talagalay qoraalada kulliyadaha. Waa inay istcimaalaan pdf taas oo aad ugu habboon uguna macquulsan adduunka.
Oo amaan ah
Anigu waxaan ahay isticmaale Google Docs oo waxaan u isticmaalaa sida saxda ah ee ku xusan qoraalkan. Waxaan ku isticmaalaa LibreOffice mashiinkeyga oo waxaan galiyaa feylahayga Dukumintiyada si loo keydiyo iyo / ama inaan u adeegsado wixii "cybercafe" ah oo leh Windows. Waa wax aad u faa'iido badan, gaar ahaan maxaa yeelay waxay leedahay astaamo aanu LibreOffice samayn (oo si gaar ah u tilmaamaysa Calc) oo aanu seegin ereyga ama Excel wax badan. Marka la eego arrimaha asturnaanta, markii hore waxaan qabay cabsi xoog leh oo laxiriira qarsoodigeyga, hase yeeshe fikradda keydinta daruurtu waxay umuuqataa mid raaxo leh oo dhakhso ama goor dambe waa inaan siiyaa qof feylahayga qof (illaa aan abuuro marti u gaar ah mooyee), iyo kahor sida Dropbox ama Ubuntu One, Google ayaa ah tan ugu kalsoonida badan ee ka dhanka ah jabsiga iyo xatooyada macluumaadka.
Waan ku kalsoonahay waxa la yiraahdo aaminaad, kaliya kumbuyuutarkeyga iyo PGP, maxaa yeelay kuma kalsoona xusuustayda haha.
Iyo gabar gaar ah dabcan
Maxay tahay naarta aad ka hadlayso O_O ... cadaabta, maalinba maalinta ka dambeysa waad kasii daraysaa ...
Faallooyinkaasi waxay muujinayaan inaad jeceshahay gabadhaas
Labadiinaba waxaad bilaabeeysaan inaad bararaan kuwooda igu laalaya doodadiina… Waxaan kugu dhaaranayaa inaan raadinayo wado aan ku maro oo aan dameerahaaga ku laado ¬ ¬.
Geesinimo, ku dhammayso malab bacaad ah sida dumarka aad jeceshahay oo aad u siiso jacayl, taasi waa waxa aad rabto
Alejandro, shit go oo ha raadsan qolofta xD
Haha ha dhaleecaynin wada-hadalladayda markaa
YAA adiga dabeecad xumo leedahay ... in jebinta qolkaaga aysan aheyn wax qosol badan, sax? OL LOL !!!
Waa inay noqotaa neerfaha maalinta ku xigta berri
dumarka aad jeceshahay
4-4-2011: Halkaas waxaa ku dhaafay macno darrooyinka hormoonka, tan iyo markaasna wax bur bur ah oo i soo gaadhay ma jirin
Waxaan isla dhahayaa, aamin aamin no, intaa ka sokow kuma raacsani mawjaddan cusub ee ah inaan wax walba ku dhex leeyahay daruurta, wax kastoo ay sheegaan, kumbuyuutarkaygu had iyo jeer wuu sii faa iidaysan doonaa oo ka sii ammaan badnaan doonaa. Google Docs waxay ku leedahay waxtarka jaamacada isku shaandheynta wadajirka ah ee faylasha, waxay noqon kartaa mid aad u faa iido badan laakiin sidoo kale waxay leedahay xadeyn badan, gaar ahaan hadaan tixraacno waraaqda, Haddii aad barato injineernimada (sida kiiskeyga kiimikada Eng) waxaad ku tiirsan tahay 90% xalinta iyo macros inta badan xirfadaada oo dhan iyo sida iska cad ma jiraan wax halkan lagu qabanayo, xitaa Xafiiska Libre wuxuu leeyahay cayayaanka qaybtan.
Waa waqtigii la isku dayi lahaa in la arko sida ay u shaqeyso
Waa hagaag dad, waxaas oo dhan ee ".docx", ha iloobin in Libreoffice 3.5 laanku ballanqaadayo taageero ka sii wanaagsan, oo sidaasna ku soo afjarayo riyadan. Fikirkaygu waa ka baxsan xorriyadda ay software-ka bilaashka ahi ku siiso, ku tiirsanaanta inbadan oo adeegyada daruuriga ah si aan ula wadaago macluumaadka xasaasiga ah waa qalad, waxaan dan ka leeyahay asturnaankayga, waxaanan tebayaa waqtiyada aad dabaasha ka biqi karto adigoon ka baqayn inay ilaalin doonaan macluumaadkaaga. Ma jecli jihada adeegyadan. Waxaa jira siyaabo lagula xiriiro adiga oo aan ku xirnayn iyaga.
Waxaan magno dijo
Uguyaraan waa inaan ahaadaa kan kaliya ee koorsadayda jaamacadeed waxaanan ku dhiiran karaa inaan idhaahdo kuwa yaqaana oo adeegsada odt-ka, dhibaatada ugu weyn ee is-waafajin ee aan ku dhex maray Microsoft Office iyo Libreoffice ayaa ah daboolida shaqooyinka ... XD .. .. iyo ciriiriga xarfaha ayaa ka tagay markii la furayay qaab tartanka. Maaha wax nolol ama geeri ah adigoo ku wareejinaya pdf ka dibna u diraya feylka oo wata tilmaamo yar oo ay ku koobi karaan kuna dhajin karaan otomaatigooda xafiiskooda waana intaas. La hagaajiyay dhibaatada is waafaqsanaanta dadaal yar oo uusan dili doonin ¬_¬ ...
Waa qormadaydii ugu horreysay ee boggan…. Anigu waxaan ahaa raaciye tan iyo markii boggan la abuuray… Hambalyo oo ku sii soco sidan… ñ_ñ Salaan !!!
Ku jawaab MaGnoAdemos
Mahadsanid oo soo dhawow 😀
Farxad noo ah inaad ku faraxday oo aad faallo ka bixisay, waxaan rajeyneynaa inaan sii wadno qorista maqaallada aad jeceshahay iyo qof walba 🙂
Uma maleynayo inay wax yar dili doonto, laakiin waxay ka dhigaysaa caajis ama waxay ka dhigtaan cudurdaar doqon ah, taasi waa sababta aan uga fogaado inaan lumiyo darajooyinkayga nacasnimo because.
Wayland 1.0 dhamaadka sanadka